डचटाउनमा अद्भुत सप्ताहन्त - डचटाउनएसटीएल.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डाउनटाउन डचटाउन स्प्रिंग फुटपाथ बिक्री
हामीले शुक्रबार र शनिबार सँग शुरु गरेका थियौं डाउनटाउन डचटाउन स्प्रिंग फुटपाथ बिक्री, दुई दर्जन भन्दा बढी पसलहरू, रेस्टुरेन्ट, विक्रेताहरू, र संगठनहरू Meramec Street को तीन ब्लकहरूको साथ विशेषता। दोहोरिएको खरीददारहरू र नयाँ ग्राहकहरू अविश्वसनीय डिलहरू र अद्वितीय स्वादहरू फेला पार्न झरे।
सप्ताहन्त बिक्री को मालिकहरु द्वारा आयोजित गरीएको थियो क्वाम्बोका, लोगानका बच्चाहरूको पुन: बिक्री, र अन्य डचटाउन व्यवसाय मालिकहरू मार्फत व्यवस्थित गर्न सुरु गर्नेहरू डचटाउन व्यापार जिल्ला फेसबुक समूह। सँगै काम गर्दै, हाम्रा छरछिम उद्यमीहरूले हाम्रो एक्लेक्टिक डाउनटाउन डचटाउन शपहरू देखा पर्दा रेजिस्टरहरू बजिरहे।
यस बीच, अर्बन ईट्स नेबरहुड फूड हलमा खाना विक्रेताहरूले स्वादिष्ट व्यंजनहरू प्रस्तुत गरे जुन डचटाउनमा मात्र पाउन सकिन्छ। कालो कफी र पूर्ण रूपमा प्यास्ट्री हामीलाई किनमेलको ठूलो दिनको लागि जगाउन मद्दत गर्‍यो। जुआनिटाको क्रियोल सोल क्याफे सन्तुष्ट पेट बाहिर बेच्दा सम्म। र टाकोस ला जेफा आफ्नो अनूठो बिरिया टाकोस, क्वेकाडिल्लाहरू, र नाचोसको आनन्द लिन यस क्षेत्र वरिपरिका खाना ल्याए।
छिमेकी संगठनहरूले डचटाउनमा बढ्दो गतिलाई जोड दिइरहेका थिए र छिमेकीहरूलाई संलग्न हुनको लागि भर्ती गरिरहेका थिए। DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, उपचार हिंसा, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन सबैले छिमेकको कार्यक्रमहरू र संसाधनहरूको बारेमा सन्देश फैलाउन मद्दत गर्‍यो।
शनिबार, क्रस ग्रान्ड बच्चा र वयस्कहरू सँगै फोटोहरूको लागि इस्टर बन्नीलाई डाउनटाउन डचटाउन ल्याए किनकि शपरहरू र छिमेकीहरूले मेरामेमेकको लागि टहल गरिरहे। न्यानो मौसमले घटनाको दोस्रो दिनमा जिल्लामा अझ बढी पसलहरू ल्यायो, साथै नजिकैका धेरै नयाँ आगन्तुकहरू पनि थिए।
मार्क्वेट पार्क सफाई
यसअघि शनिबार, धेरै छिमेकीहरू जम्मा भए मार्क्वेट पार्क केहि वसन्त सफाई को लागी। लामो हिउँदमा जम्मा भएका केही रद्दीटोकरीहरू हटाउन स्वयम्सेवकहरूले गण्डुहरू दान गरे र उनीहरूका समाते। वसन्त वसन्तको साथ, व्यस्त मौसम शुरू हुनुभन्दा अघि पार्कले धेरै आवश्यक सफाई प्राप्त गर्‍यो।
यो मार्क्वेट कम्युनिटी डे किकबल प्रतियोगिता आइतवार, मार्च २th मा निर्धारित गरिएको थियो। तर निरन्तर उच्च हावा र मजबूत gusts संग, मौसम मैत्री खेलहरु को लागी एक धेरै कठिन थियो।
खेलहरू अप्रिल ११ सम्म स्थगित गरियो। तर त्यो दिन अझै पनि घमाइलो थियो, र हातमा डीजेको साथ र ब्राटवर्ट्स र कुखुराको पखेटा तयार पार्न, छिमेकीहरूले अझै दिनको धेरैजसो गर्ने निर्णय गरे।
छिटो आइपुगेका टोलीहरू बीच एक जोडीले अवरुद्ध, अस्वीकार्य खेलहरू भयो। खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनेछन् जब आधिकारिक टूर्नामेंट हुन्छ अब तिनीहरू मार्केटका मैदानहरूको छेउछाउसँग परिचित छन्।
यसैबीच, ब्लास्टरी डेको नायक एक आगन्तुक थिए जसले पार्कमा धेरै पतंगहरू ल्याए र तिनीहरूलाई उपस्थित बच्चाहरू (र वयस्कहरू) सँग साझा गरे। पायलटहरू फील्ड हाउसको छेउमा खुला पहाडमा लागे र तिनीहरूको पतंगहरू सहजै हटाइए र आकाश भरि ग्लाइड भयो।
केही दर्जन छिमेकीहरूले चिसो हावालाई बहादुरी गर्न जारी राख्दा संगीत र बार्बेक्युको धुँवाले पार्क भर्नुभयो। बच्चाहरूले सँगै खेले, वयस्कहरू सँगै नाचे, र किशोर-किशोरीहरू पनि आफैंमा रमाइलो भएको देखिन्थ्यो।
पछि दिउँसो, केहि उच्च स्तरको एमेच्योर टीमहरू लिईन् मार्क्वेट पार्क फुटबल क्षेत्र खेलको लागि। खेल लिनको लागि पार्कको किनारमा फ्यानहरू भेला भए, मार्क्वेटमा सप्ताहन्त दिउँसोको नियमित घटना। मार्क्वेट पार्कको सहयोगी भारी प्रयोग गरिएको पिचमा सुधारको लागि लामो समय सम्म धकेलेको छ, र आशा छ केही क्षतिग्रस्त लगानी क्षितिजमा छ।
त्यसो भए डचटाउनमा यो केहि हप्तामा भएको थियो। हामी आशा गर्दछौं तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो! तर यदि तपाईंले यो हराउनुभयो भने, तपाईं जहिले पनि साउथ साईडमा हप्ताको धेरै भन्दा धेरै चीजहरू हाम्रो अनौंठो पसलहरूमा गएर, हाम्रा रेस्टुरेन्टहरूको संरक्षणमा, वा हाम्रो पार्कमा आराम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मा नजर राख्नुहोस् डचटाउन घटनाहरू क्यालेन्डर अधिक विशेष घटनाहरूको लागि, वा कुनै पनि समयमा आउँनुहोस्!
खैर, त्यहाँ एक गुच्छा बढी फोटोहरू छन् डचटाउनस्टाइल फ्लिकर पृष्ठ। बाट थप फोटोहरू हेर्नुहोस् फुटपाथ बिक्री, आइतबार मार्क्वेट पार्कमावा केवल वरिपरि ब्राउज गर्नुहोस्।
तल दायर गरिएको डचटाउन कार्यक्रमहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र डचटाउन कार्यक्रमहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 2nd, 2021 .
DutchtownSTL.org डचटाउन कार्यक्रमहरू डचटाउनमा अद्भुत सप्ताहन्त